तेस्रो संस्करणमा सुन्दरादेवी म्यूजिक अवार्ड राष्ट्रिय रुपमा हुदै - Janapukar
२०७२ सालबाट मोफसलको जिल्ला नुवाकोटबाट शुरु भएको सुन्दरादेबी संदेश बागमती लोक दोहोरि अवार्ड यस पटक तेस्रो सस्करणमा आईपुग्दा रास्ट्रीय रुपमा सम्पन्न हुदै छ । यतिबेला अवार्डको अध्यक्ष किरण अधिकारि निकै दौडधुपमा हुनुहुन्छ । अवार्डको तयारि भईरहेको छ ।
जेठ १५ गते हुने अवार्ड स्थानीय निर्बाचनको कारण केहि पर धकेलिएको छ । सुन्दरादेबी संदेश म्युजिक अवार्डको सेरोफेरोमा रहेर किरण अधिकारीसंग गरिएको कुराकानी :-
के छ आराम हुनुहुन्छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल ?
- हजुर एकदम आराम छु । केहि समय अगाडी मेरो र पुस्कर अर्यालको सहकार्यमा आएको रोइला गित सार्छु भन्छौ राजधानिको प्रमोसनमा व्यस्त भए । अहिले सुन्दरादेबी संदेश म्युजिक अवार्डको तयारीमा छु । ्अवार्डलाई भब्य र शब्य बनाउन कसरि लाग्ने भनेर योजना बनाईरहेको छु ।
अवार्ड जेठ १५ मा हुन्थ्यो हैन र ?
- हजुर जेठ १५ मा नै हुने हो पहिला तय गरे अनुसार तर मुलुक नै निर्बाचन मय भएकोले मिति केहि पर धकेलिएको हो ।
यो पटक तेस्रो सस्करण गर्दै हुनुहुन्छ पहिला र अहिलेमा के फरक छ ?
- नेपालि लोकसंगीत हाम्रो पहिचान ,संचार सस्थाबाट कलाकार सम्मान हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराको साथ २०७२ सालमा सुन्दरादेबी संदेश बागमती लोक दोहोरि अवार्ड जुन महाबिनाशकारी भूकम्प गएको अघिल्लो दिन संचालन गर्यौ । २०७३ मा आईपुग्दा संगीतको क्षेत्र फराकिलो छ भन्ने सोचले हामीले अलि फराकिलो बनायौ । नेपालि गीतसंगीत हाम्रो पहिचान संचार सस्थाबाट कलाकार सम्मान हाम्रो अभियान भन्ने नाराको साथ् सुन्दरादेबी संदेश बागमती म्युजिक अवार्ड गर्यौ । पहिलो र दोस्रोमा हामीले बागमती अंचलको कलाकारमा मात्र समेटेर अवार्ड गर्यौ भने यो पटक हामि सुन्दरादेबी संदेश म्युजिक अवार्डको नामाकरण गरेर रास्ट्रीय स्तरमा गर्दै छौ । यसपटक हामीले लोकदोहोरी ,आधुनिक र चलचित्र सबै विधा समेटेका छौ । जसको उत्कृस्ट पाच केहि दिनमा सार्बजानिक गर्ने छौ ।
अवार्ड गर्ने रहर या प्रेरणा को बाट जाग्यो रुके देखेर प्रेरित हुनुभयो ?
- हामीले जब नुवाकोटबाट एउटा साप्ताहिक पत्रिका संचालनमा ल्यायौ । त्यो बेला नै हामीले गीतसंगीत अनि नया कलाकार खोजि अनि कलाकारको सम्मानको स्थान दिएर अगाडी बढ्ने सोचको साथ् आएका थियौ । साप्ताहिक पत्रिका सुन्दरादेबी संदेश जब प्रकाशन हुन थाल्यो । त्यसपछि राजधानीमा संचालन हुने अवार्डको मिडिया सपोर्टरको काम गर्न थालियो । अनि मोफसल मा पनि यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने रहर जाग्यो यो कुरा मैले मेरा अग्रजहरु जो लामो समय देखि अवार्डको क्षेत्रमा कम गर्दै आउनु भएको थियो । चलचित्र पत्रकार संघको निबर्तमान अध्यक्ष अनि डिसीने अवार्डको अध्यक्ष आदरणीय शान्तिप्रिय ,तिज गित म्युजिक अवार्डको अध्यक्ष राजु बजाज अनि म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डको अध्यक्ष सुमन बैरागी संग अनुभब बाड्न आग्रह गर्दै सहयोगको हात मागे अनि वाहाहरुले सहर्ष स्वीकार गर्नु भयो । अनि मैले जो लामो समय देखि लोकसंगीत र लोकसस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपको अध्यक्ष रामचन्द्र कोइराला आरसी ,नारायण रायमाझी ,दुर्गा रायमाझी ,सुमन दाहाल ,मोहन निरौलाको सहयोगमा अगाडी बढे र यो स्थितिमा आइपुगे । अर्को छुटाउन नहुने नाम आवाजको दुनियाको साथि आदरणीय दिनेश डिसी ले पनि अवार्डलाई सहयोग र सल्लाह दिनु भएको छ ।
मोफसलमा काम गर्न कतिको गाह्रो छ ?
- गाह्रो र दुखको कुरा नगरु । तर जुनसुकै काम गर्दा पनि सुख हुन्छ र काम सधै गाह्रो हुन्छ । अनि अर्को कुरा म त्यस्तो मान्छे हु चुनौती जहा हुन्छ त्यहा काम गर्न रुचाउने मान्छे हुन् ।
राजधानीमा हुने अवार्ड र यो अवार्डमा के फरक छ ?
- मैले अघि नै भने राजधानी जहा सुबिधा सम्पन्न छ । त्यहा धेरै कार्यक्रम हुने गर्छ । राजधानी पनि पहिलाको बागमती अंचल अहिलेको प्रदेश नम्बर ३ मा पर्छ । मोफसलमा सायद नुवाकोट अनि सुन्दरादेबी संदेश नै हो पहिलो रास्ट्रीय स्तरको अवार्ड गर्ने ्हामि मोफसलमा बसेर कलाकारको प्रतिभा खोजिरहेका छौ । रास्ट्रीय स्तरको कार्यक्रम अनि रास्ट्र भरिको कलाकारको प्रतिभा मोफसलमा बसेर खोज्नु पनि सानी हैन । अब आफै भन्नुस के फरक छ ।
अवार्ड राम्रालाइ हैन हाम्रालाई दिइन्छ भन्छन ?
- खै हामीले पनि सुनेका छौ । तर मलाई त्यो कुरामा बिस्वास छैन । किनकी सयौ जनाले फाराम भरेका हुन्छन अनि त्यसमध्य पनि केहि स्रस्टा सर्जक उत्कृस्ट पाचमा पर्ने अनि त्यो मध्येबाट एक जनाले अवार्ड पाउने हुन्छ । यो कुरा चाहि जसले आफ्नो पक्षमा आएन त्यसले नै चलाउने हल्ला हो । अर्को कुरा हामि यो कुरामा सचेत छौ ।
अवार्डको फाईनल कहिले र कहा हुदैछ ?
- अवार्ड श्रावन १४ गते शनिबार एक भब्य र शब्य समारोह बीच हुदै छ । हामि स्थानको बारेमा अहिले भन्न सक्दैनौ किनकि धेरै जिल्लाको साथीहरुले अनुरोध गरिरहनु भएको छ । हेरौ केहि समय पछी स्थान तय गर्ने छौ ।
अवार्ड निस्पक्ष हुन्छ त,किनबेच हुन्छ रे नि अवार्डहरु ?
हामि पूर्ण तया स्वच्छ अनि निस्पक्ष गर्छौ्रकिनकी प्रतिभाको किन बेच हुनुहुदैन । किनबेचको कुरा गर्नु भयो खै हामीलाई कसिले त्यस्तो भन्न आएका छैन । किनेर पाउने भए त दुख गरेर किन यत्रो कार्यक्रम गर्न पर्यो । अवार्ड बनायो अनि सबैलाई दिए भै हाल्यो नि हैन ।
तपाइँ धेरै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ,कसरी सफल भईरहनु भएको छ ?
- हेर्नुहोस मलाइ मेरो परिवारको पूर्ण सहयोग छ । अनि नुवाकोटमा क्रियाशील संचारकर्मी साथीहरुको पूर्ण सहयोग छ । आफं साथि भाई अनि शुभचिन्तकको सल्लाह ,सहयोग,साथ र सुझाबले म सफल भईरहेको छु ।
तपाइले नसम्झी नहुने नाम छ तपाईलाई यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ?
- हजुर मलाइ यो क्षेत्रमा हरदम सहयोग गर्ने मनोज थापा ,गीता अधिकारि ,राम ढकाल ,प्रलाहद केसी ,पुस्कर अर्याल ,पंकज शर्मा अनि धेरै हुनुहुन्छ सबैको नाम लिन गाह्रो छ । सबैको सहयोगले नै यहा आइपुगेको हु ।